Dzivirira makungwa neAngry Birds 2 yakasarudzika edition WWF | IPhone nhau
Sezvatakambotaura mune dzimwe nhau dzapfuura, Apple yakashandura 100% kuita izvi Zuva rePasi Nechinangwa "chekusiya nyika zvirinani kupfuura zvatakaiwana", nekuda kweizvi yasarudza kupa iyo yose purofiti yeApp Store mukati mevhiki ino kune zvinokonzera ecology nekusimudzira. Mafomu mazhinji akabatana zvizere nechikonzero, uye Rovio aisada kushoma, Shiri Dzine hasha 2 dzakapfeka girini (mune ino bhuruu) kune yayo yekuvandudza yakatsaurirwa kunyanya kune Zuva rePasi, Isu tinokuudza iwe nhau mu iPhone News.
Nenzira iyi, kubvira muna Kubvumbi 14, Angry Birds 2 dzakabatana neinonzi Apps yePasi nechinangwa chekushanda pamwe neWWF nekuvapa mari yese inoburitswa nemaapplication muApp Store. Rovio haigone kusavapo pachikonzero ichi chinorumbidzwa, kudzosera zvishoma mumwe wemitambo yake inozivikanwa.
Zvirongwa zvePasi: Dzivirira makungwa neShiri Dzinotsamwa
Rovio, Apple uye WWF vari kushanda pamwechete kuchengetedza hupenyu papasi redu. Kubva ikozvino kusvika Kubvumbi 24, 100% yemari inowanikwa kubva kuWWF mapakeji akatengwa muchitoro ichaenda kuWWF.
Chikamu chakakosha uye zviperengo zvinowanikwawo kwenguva yekuratidzira. Kana usingavaone, ramba uchitamba! Ivo vanovhurwa mushure mematanho gumi (akakosha mwero) uye gumi nematatu (spell). Dzidzisa nguruve idzodzo kuremekedza makungwa edu.
Sezvo isu taverenga mune tsananguro, nyowani dzakakosha mazinga pamwe nechiperengo kupa zvishoma mukurumbira kune izvi Zuva rePasi. Izvo zvakanaka kuti kunyorera uye vanogadzira vanobva muchikamu ichi vanopinda chikonzero, kuyedza kuenzanisa dambudziko rezvakatipoteredza rakakomberedza nyika yedu uye nekudaro kubatana mukuziva kuti vese takabatana tine nguva yekugadzirisa dambudziko remangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Dzivirira makungwa neAngry Birds 2 yakasarudzika edition WWF
Iyo iPhone ya2017 ichave iine AMOLED skrini uye girazi kunze [RUMORI]